Kenya oo qorsheynsay in ay Ciidankeeda kala baxdo somalia Soomaaliya. – Beegsonews-Wararka maanta
Home WARARKA MAANTA Kenya oo qorsheynsay in ay Ciidankeeda kala baxdo somalia Soomaaliya.
Kenya oo qorsheynsay in ay Ciidankeeda kala baxdo somalia Soomaaliya.
Kenya oo Doonaysa inay Ciidankeeda Kala Baxdo Hawlgalka Soomaaliya.
Wasaaradda difaaca ee Kenya, ayaa maalmaha Soo socda bilaabaysa, wadaxaajood ay ciidankeeda kaga saarayso hawlgalka Nabad ilaalinta AMISOM, ee Soomaaliya sanadka 2021.sida uu ogaaday wargeyska Daily Nation ee kasoo baxa Nairobi,warkan daabacay.
Ciidamada Kenya ayaa gudaha Soomaaliya ku jira muddo 8 sano ah iyagoo xadka kasoo talaabay 16.October.2011.
Wararka oo ay warbaahinta kenya sidoo kale ka qortey ayaa sheegaya in la qorsheynayo iney gabi ahaanba kala baxaan somaaliya ciidamadooda, iyadoo mar hore al shabaab sheegtey iney nabad galin doonaan hadii ay dhamaan ciidamadeeda kala baxdo somaaliya hadii kale aanay nabad ahaan doonin
Dhanka xildhibaano ka tirsan barlamaanka kenya oo kasoo jeeda NFD ama somalida kenya ayaa yaguna u sheegey dawlada in amarto in wasiirkii hire ee amniga jubaland janaan oo si dhakhso ah ugu baxo dhamaan cioda kenya
Xukuumadda Somaliland oo soo Afjartay jabhadii Gobolka Awdal
Degdeg Qarax ka dhacey muqdisho